महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइराला नातामा दाजुभाइ पछन् । महामन्त्री कोइरालाले सर्लाहीमा केही दिनअघि एक कार्यक्रममा शेखरको बयान गर्दै सभापतिमा उनको पनि आकांक्षा रहेको बताएका थिए ।
सो भिडियो अहिले चर्चामा छ । सो कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले शेखरले सबैलाई समेट्ने अवस्था आए आफू ब्याक हुन सक्नेसमेत संकेत गरेका थिए ।
‘रामचन्द्रजी एकपटक लडिसक्नुभयो, सिटौलाजीलाई पनि हामीले तान्नुपर्छ, उहाँसँग पनि धेरै मान्छेको आकर्षण छ, किनभने सिटौलाजीसँग धेरै मान्छेको आशा छ, उहाँलाई तानेर एउटै मात्र उम्मेदवार बनायौं भने शेरबहादुर देउवा हार्नुहुन्छ,’ सो भिडियोमा उनले अघि भनेका छन्, ‘अर्को प्रकाशमान, भन्दाखेरि मलाई नराम्रो लाग्छ तर सत्य हो, उहाँ काठमाडौंमै घेरिएर बस्नुभएको छ, बाहिर निस्केपछि प्रकाशमान सिंहलाई चिन्दैनन् मान्छेहरूले, हुन त उहाँ महामन्त्री हुनुभयो, त्यो अलग पाटो हो तर उहाँमा जुन आत्मीयता छ साथीहरूसँग त्यो म देख्दिनँ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
त्यसपछि उनले दाजु शेखरप्रति आफ्नो भनाइ मोड्दै भनेका छन्, ‘चौथो हो, शेखर दाइ, शेखर दाइ पनि लागिराख्नुभएको छ, भिडिरहनुभएको छ, मैले भनिहालेँ, हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको भावना हो । त्यसलाई म कदर गर्छु र सम्मान गर्छु, शेखर दाइसँग कुरा हुन सकेको छैन । म जानेबित्तिकै उहाँसँग कुरा राख्छु ।
उहाँलाई सभापति हुन मन छ भने अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्‍यो । मलाई त गरिहाल्नुहुन्छ, मैले भनेको म बाधक हुदिनँ । बरु सबै मिलाउने काममा लाग्छु ।’ शशांकको यो आशयले सिटौलालाई पनि आफ्नो समूहमा मिलाउने संकेत गर्छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आज महोत्तरी आउँदै
संवैधानिक जटिलता आउने भन्दै एमालेको सहभागी विना नै कर्णाली…
भैरहवाबाट बागलुङ जाँदै गरेको बस दुर्घटना, चालकको मृत्यु, आठ…
किशोर कुमारको तेस्री श्रीमतीलाई बिहे गरी भित्राएका थिए अभिनेता…